မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူမျိုးရေး အမုန်းပွားမှုများကြောင့် မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ထိန်းချုပ် ကိုင်တွယ်တော့မည်လော ? - News @ M-Media
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူမျိုးရေး အမုန်းပွားမှုများကြောင့် မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ထိန်းချုပ် ကိုင်တွယ်တော့မည်လော ?
in သတင်းဆောင်းပါး — September 10, 2013
စက်တင်ဘာ ၆ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်
မူရင်းဆောင်းပါးရှင် – Nirmal Ghosh ( Indochina Bureau Chief In Bangkok )
ဘာသာပြန် – မြင့်မိုရ်မောင်မောင်
မကြာမြင့်လှသေးသည့်ကာလတစ်ခုက မြန်မာနိုင်ငံ၏စာပေစိစစ်ရေးရုံးခန်းတွင် စစ်အရာရှိလူငယ်တစ်ဦးသည် ထင်ရှားသောမြန်မာစာရေးဆရာတစ်ဦး၏ ဆောင်းပါးပါဝင်သည့် သတင်းစာအား ချေမွကာ ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ပစ်ချလိုက်၏။ ၄င်းနောက် ဂေါက်ရိုက်တံ တစ်ချောင်းဖြင့် အခန်းထောင့်သို့ ရိုက်လွှတ်လိုက်လေသည်။
ယခုသော် ဂေါက်ရိုက်တံမှာ ဗီရိုထဲရောက်ရှိနေပြီး စိစစ်တည်းဖြတ်ရေး ဟူသည်မှာလည်း မရှိတော့ပါလေ။
နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေး နောက်ပိုင်းတွင် အရပ်သားအစိုးရမှ အင်တာနက်ကို လွှတ်ပေးလိုက်၏။ ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာထုတ်ဝေခွင့်ကိုလည်း ပေးလိုက်၏။ ဤသို့ဖြင့် လိုင်စင်ရ သတင်းစာစောင်ပေါင်း ၃၁ စောင်ထွက်လာလေရာ နေ့စဉ်ထုတ်ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာမှာ ၁၂ စောင် နှင့် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ ၄ စောင်အထိ ရှိခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာများသည် လွတ်လပ်မှုနှင့်ယှဉ်တွဲနေသော တာဝန်ယူမှုကိစ္စ၌ မကျင့်သုံးနိုင် -မရင့်ကျက်နိုင်သေး။ အထူးသဖြင့် ဘာသာရေးနှင့်လူမျိုးရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းများ၌ ဆူလွယ်နပ်လွယ် လမ်းကြောင်းဖက် လျှောက်လှမ်းနေသည်ဟု ဝေဖန်ခံနေရ၏။
ပုဂ္ဂလိကစာစောင်မီဒီယာများအနေဖြင့် အဆင့်အတန်းရှိရှိ ဆောင်ရွက်မည်၊ ဆူလွယ်နပ်လွယ် ဖော်ပြရေးသားချက်မှ ခွဲထွက်မည်ဆိုလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုရှိသောနိုင်ငံဖြစ်သော်လည်း မွတ်စ်လင်မ်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားချက်များသည် လက်ရှိအခြေအနေအထိ ရောက်ရှိတောက်လောင်လိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း အချို့က တွေးဆကြ၏။
ယမန်နှစ် မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူမျိုးခွဲခြား အကြမ်းဖက်မှုအတွင်း လူ ၁၀၀ ဦးထက်မနည်း သေကြေပျက်စီးခဲ့ရပြီး အိမ်ယာမဲ့သူပေါင်း တစ်သိန်း လေးသောင်းအထိ ရှိခဲ့ရသည်။ ထိုသူတို့အနက် အများစုမှာ လူနည်းစု ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စ်လင်မ်တို့ ဖြစ်ကြ၏။
ယခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း နှင့် မြောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားသော အကြမ်းဖက်မှုများတွင် သေဆုံးသူ ၅၀ နှင့် ထောင်ပေါင်းများစွာ အိုးအိမ်မဲ့ ဖြစ်သွားရသည်။
မန္တလေးမြို့ကိုခြေကုပ်ယူထားသည့် ဦးဝီရသူဦးဆောင်သော ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကဲ့သို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အစွန်းရောက်အုပ်စုတို့သည် မီဒီယာကို လွှမ်းမိုး၍ မွတ်စ်လင်မ်ဆန့်ကျင်ရေး လှိုင်းလုံးအား ကြီးထွားလာစေခဲ့သည်။
“ မီဒီယာအများစုကိုကြည့်ယင် အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေး နဲ့ မွတ်စ်လင်မ်ဆန့်ကျင်ရေးဖက် ဦးတည်နေတာကို တွေ့နေရတယ်။ ဒါ့ပြင် ဆိုရှယ်မီဒီယာသမားတွေကလည်း ကျင့်ဝတ်နဲ့ဆိုးကျိုးကို အလေးမထားကြဘူး ” ဟု ဧရာဝတီ မဂ္ဂဇင်း၏အယ်ဒီတာဖြစ်သူ ဦးအောင်ဇော်မှ ပြောဆိုသည်။
တစ်ဖက်စောင်းနင်းဖော်ပြချက်များအဖြစ် တွေးဆနိုင်စရာ သာဓက ၂ ချက် အနည်းဆုံး ရှိနေပေသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအထူးသံတမန် သောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တားနား ရောက်ခဲ့စဉ်က သူသည် မွတ်စ်လင်မ်တို့အား လွန်ကဲစွာ ရိုသေလေးစားပြီး လူများစုအသိုင်းအ၀ိုင်းကိုမူ ပြည့်ပြည့်၀၀လေးစားသမှု မပြုခဲ့ဟု အလဲဗင်းမီဒီယာကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာအုပ်စုများမှ ပုံဖော်ခဲ့ကြ၏။
သို့သော် ယင်းတွေ့ဆုံမှုများ၌ လိုက်ပါခဲ့သူတစ်ဦးက ၄င်းမှာ လုပ်ကြံချက်သာဖြစ်လျက် စစ်စစ်၌မူ မိမိမျက်မြင်အရ သံတမန်သည် ထိုသူများအားလုံးကို တန်းတူညီမျှ ဂါရ၀တရားဖြင့် ဆက်ဆံခဲ့ခြင်းကို တွေ့ရကြောင်း ဆိုခဲ့သည်။
ပုံအညွှန်း – ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့က ပြည်လုပ်ခဲ့သည့် မွတ်စ်လင်မ် ပညာရှင်များ နှင့် Unity for Peace Networks ၏ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲသတင်းအား The Daily Eleven သတင်းစာမှ မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံသတင်း [Link]
တစ်ခါ ဇူလိုင်လအတွင်း ရန်ကုန်မြို့တွင်ပြုလုပ်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု၌ The Voice Weekly ၏ သတင်းထောက်က မွတ်စ်လင်မ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးအေးလွင်အား နိုင်ငံတော်သီချင်း သီဆိုပြရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ယင်းတောင်းဆိုချက်မှာ လက်ရှိဆွေးနွေးပွဲနှင့် ဆီလျော်အံဝင်မှုမရှိကြောင်း၊ ဂျာနယ်လစ်အား သီးသန့်အားဖြင့် သီဆိုပြမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးအေးလွင်မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် နိုင်ငံတော်သီချင်းအား သီဆိုရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်ဟု သတင်းတွင် ထည့်သွင်းရေးသားဖော်ပြလိုက်လေသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစွန်းရောက် အမျိုးသားရေးဝါဒီတို့သည် ထိုအချက်ကိုပင် မကြာခဏဆိုသလို ဇောင်းပေးလျက် ရှိကုန်၏။ မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းရှိမြို့တစ်မြို့တွင် မွတ်စ်လင်မ်တို့၏နေအိမ်နှင့်ဆိုင်များကို မီးတင်ရှို့ကြစဉ်ကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အကြမ်းဖက်အုပ်စုမှ နိုင်ငံတော်သီချင်းအား သံပြိုင်သီဆိုခဲ့ကြသည်။
London School of Economics ၏ visiting fellow တစ်ဦးဖြစ်သော ဒေါက်တာ မောင်ဇာနည်မှ The Straits Times ထံ ပေးပို့သည့် အီးမေးလ်တစ်စောင်၌ ဤသို့ဖော်ပြခဲ့၏။
“ မြန်မာစာနယ်ဇင်းသမားအများစုဟာ အစ္စလာမ်အပေါ် တစ်လွဲမြင် အကြောက်လွန်ရောဂါ စွဲကပ်နေပြီး professional အဆင့်မရှိကြဘူးလေ။ ဒါကြောင့် အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒကို ပိုပြီးအရှိန်မြှင့်လာအောင် ပရမ်းပတာ ကျင့်ဝတ်မဲ့ဖော်ပြနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် မအံ့သြမိပါဘူး ”။
ပကတိတရားကို ပုံဖျက်ရေးသား ဖော်ပြချက်များသည် အာရှ လူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင် မထူးခြားလှ။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးနှင့် ဘာသာရေးကို ကွဲပြားအောင်မခွဲခြားတတ်သူများ ကြီးစိုးနေသောအသိုင်းအ၀ိုင်းများ၌ ဖြစ်၏။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင်လည်း ယမန်နှစ်အစောပိုင်းကတည်းက ဆင်ဟာလာ ဘာသာစကားဖြင့်ဖော်ပြသည့် မီဒီယာ အားလုံးလိုလိုမှ မွတ်စ်လင်မ် ဆန့်ကျင်ရေးကိုသာ တစ်ဖက်သတ်ရေးသား တင်ပြထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူများစု မြန်မာ လူမျုိုးများကဲ့သို့ သီရိလင်္ကာ လူများစု ဆင်ဟာလီတို့သည်လည်း မိမိကိုယ်ကို ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓ ဘာသာအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ချုပ်ကိုင်ထားသူများအဖြစ် အမြင်ထား ရှိနေကြပေသည်။
“ အဖုံးအကာကိုဆွဲဖွင့်ပြီး မကျေနပ်ချက်အပေါင်း ပွင့်အံလာမှုရဲ့အဆိုးဆုံးအဖြစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မီဒီယာတွေကလည်း မီးလောင်ရာလေပင့်ကြသေးတယ်။ မုန်းတီးရေး စကားတွေကို ရောင်းစားကြတယ်။ နိုင်ငံရေး သို့မဟုတ် စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်အတွက် မီဒီယာတွေရဲ့ဖောက်ပြန်နေမှုက စိုးရိမ်စရာပါဘဲ ” ဟု တောင်အာရှသတင်း ဦးစားပေးမဂ္ဂဇင်း Himal အား ထုတ်ဝေခဲ့သူ နှင့် Nepali Times ၏ အယ်ဒီတာ ကွန်ဒါ ဒီဇစ် (Kunda Dixit) မှ ပြောဆိုလိုက်သည်။
အကြွင်းမဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ပြန်လည်ကန့်သတ်ရန် ကြိုးစားသောအားဖြင့် အစိုးရသည် ထုတ်ဝေခွင့် နှင့် လိုင်စင် ရုပ်သိမ်းမှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းအား ရေးဆွဲ လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဤအနေအထား၌ ဆိုရှယ်မီဒီယာ တာဝန်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေတစ်ရပ်ကို ပဲ့ထိန်းအဖြစ် အစိုးရနှင့်အတူ အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း မကြာသေးမီက သတင်းအချက်အလက် ၀န်ကြီး ဦးအောင်ကြည် က စာနယ်ဇင်းသမားတို့အား ပြောကြားခဲ့သည်။
မလှုပ်သာမလှည့်သာ တသွေမတိမ်းနာခံရမည့် လမ်းကြောင်းဖက်သို့ နောက်ပြန်လျှောဆင်းမည်လော၊ သို့မဟုတ် ပွင့်လင်းမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအကြားမှ မျှတမှုတစ်ရပ်ကို ရှာဖွေမည်လော ဟူသည့် ရွေးချယ်မှုတစ်ခုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီ ဟု သမိုင်းစာပေပညာရှင် သန့်မြင့်ဦးမှ သုံးသပ်ထား၏။
မည်သို့သော အဖြေ ထွက်လာဦးမည်နည်း ? မသိနိုင်ကြသေးပါ။
** ဆောင်းပါးရှင် Nirmal Ghosh သည် မိတ္ထီလာအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်ပြီးနောက် ၄င်းမြို့သို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လာရောက်သတင်းရယူခဲ့သူဖြစ်သည် **
စင်ကာပူနိုင်ငံထုတ် The Straits Times သတင်းစာတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် “Myanmar seeking to manage media” ဆောင်းပါးကို မြင့်မိုရ်မောင်မောင် ဆီလျော်အောင် မြန်မာပြန်ဆိုပါသည်။
Tags: media ethics, Media_To_Monitor, myanmar media